Ithegi: inkonzo yokubhalisela | Martech Zone
Ithegi: inkonzo yokubhalisela
Umsindo omnye omkhulu esiwubonayo kwi-ecommerce ngumrhumo webhokisi yokubhalisa. Iibhokisi zababhalisi ngumrhumo onomdla… ukusuka kwiikiti zokutya, kwiimveliso zabantwana, ukuya ekuphatheni izinja… amashumi ezigidi zabathengi babhalisela iibhokisi zokubhalisela. Ukulungelelaniswa, ukwenza umntu, ubutsha, ukumangaliswa, ububodwa, kunye nexabiso zizinto zonke eziqhuba ukuthengisa ibhokisi. Kumashishini e-ecommerce yoyilo, iibhokisi zokubhalisela zinokuba yinzuzo kuba ujika abathengi bexesha elinye babe ngabathengi abaphindayo. Intengiso ye-eCommerce yentengiso kufanelekile